Vaovao Tao Amerika, Te “Hamafa” Ny Lasany Ity Tanora Vietnamiana Mpitsoa-ponenana Ity · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Tao Amerika, Te “Hamafa” Ny Lasany Ity Tanora Vietnamiana Mpitsoa-ponenana Ity
Voadika ny 05 Mey 2015 3:20 GMT
Vetivety dia tonga tao Etazonia ny fianakaviana Truong rehefa avy nandositra an'i Vietnam tamin'ny taona 1975, rehefa lavo teo am-pelatanan'ny tafika Vietnamiana Avaratra ny renivohitra Atsimon'i Vietnam, Saigon. Mametraka sofina bitro eo ambonin'ny rahalahiny, Sy i Thu-Thuy Truong, farany ankavanana. Sary: Thu-Thuy Truong. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Monica Campbell ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 28 Aprily, 2015, ary navoaka eto indray noho nyy fifanarahana fifampizarana votoaty.
Paoma mena mitsingevana ao anaty barika feno rano mangatsiaka. Izany no tsaroan'i Thu-Thuy Truong rehefa tonga tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Fort Chaffee, Arkansas izy, tsy ela taorian'ny nandosirany an'i Vietnam niaraka tamin'ny fianakaviany tamin'ny Aprily 1975.
Miaraka amin'ireo ny barika misy paoma, tsaroan'i Thu-Thuy, 13 taona tamin'izany fotoana izany ny tranon'ny fianakaviana voalohany tao Etazonia. Trano kely iray tao Berkeley, California. “Na dia tsy raitra aza ny fiainana tamin'izany … trano kelinay izany,” hoy izy.
Anisan'ireo fianakaviana Vietnamiana an'arivony nandositra ny renivohitra Atsimon'i Vietnam, Saigon ry Truongs, satria nanatona ny tafika Vietnamiana Avaratra. Maro ireo nanorina fiainana vaovao tao Etazonia. Efapolo taona tatỳ aoriana, niara-niasa tamin'ny StoryCorps i Thu-Thuy sy ny rahalahiny, Sy mba hiresaka momba ny fahatsiarovan'izy ireo tamin'ny fipetrahana tany Etazonia.
Namonjy ny tobin'ny mpitsoa-ponenana tao Fort Chaffee, Arkansas ny fianakaviana Truong avy ao Vietnam rehefa tonga tao Etazonia tamin'ny taona 1975. Sary avy amin'i Nghiem Thuan. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Fotoanan'ny fiaretana vaovao izany. Tsaroan'i Sy Truong, 8 taona tamin'izany izy nitaingina Bay Area Rapid Transit voalohany, izay mandeha anaty rano ary mampitohy an'i San Francisco amin'i Berkeley ary Oakland. Nanantena hahita rano sy trondro avy eo ambaravarankelin'ny metro izay mandeha anaty rano ity zazalahy ity tamin'izany.
Na dia tonelina maizina fotsiny aza no hitany tamin'izany, hoy i Sy “zava-baovao ho ahy tsy mitovy tamin'ireo zavatra niainana tao Vietnam ny zavatra kely rehetra hitako.”
Nitolona tamin'ny kolontsaina ihany koa ry zareo mpiray tampo, ahoana na rahoviana no tazomina ny fiaviana Vietnamiana. “Tamin'izany fotoana izany, amin'ny maha-zaza, tsy hitako izay maha-zava-dehibe ny fihazonana ny kolontsainay izay hitako fa toy ny lasa,” hoy i Sy. “Ny hany fomba handrosoana sy hivoarana amin'ity tontolo vaovao ity dia ny milona tanteraka na lasa Amerikana tanteraka. Naniry saika hamafa ity ampahany ity aho noho ny antony hafa. “
Saingy hoan'i Thu-Thuy, zava-dehibe ny mozika avy any an-tanidrazana. Tia mihaino kalokalo Vietnamiana ny reniko, ary “izany zavatra izany no mitondra anay indray any amin'ny zavatra tsara ao Vietnam,” hoy izy. “Raha mbola tao Fort Chaffee izahay, tsy nanam-bola be, saingy nandoa vola izahay mba hivdy kasety sasantsasany fotsiny avy amin'ny olon-kafa izay mandrakitra ny hiran'ireo mpihira malaza. Hitanao, ankilanay, izany no hany fifandraisana amin'ny tanindrazana
Mbola zazakely i Sy Truong ankavia, sy ny anabaviny, Thu-Thuy Truong, raha tonga tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana tao Fort Chaffee, Arkansas, fotoana fohy taorian'ny nirodanan'i Saigon tamin'ny taona 1975. Nanorim-ponenana tao San Francisco Bay Area ny fianakaviany noho ny farany. Tsaroan'i Sy ny fotoana voalohany nitaingenany Bay Area Rapid Transit, izay mandeha anaty rano. Nihevitra izy fa afaka “mahita ranomasina sy trondro milomano” saingy fantany avy eo fa dia anaty tonelina tsy misy varavarankely izany. Sary: StoryCorps. Nahazoan-dalana
Nidika filentehana haingana anaty fiainana Amerikana ihany koa ny fianarana. “Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe tsapako dia ahitana olona samihafa loko ny sekoly,” hoy i Thu-Thuy. “Misy ny ankizy fotsy sy ankizy Aziatika ary misy ireo ankizy mainty hoditra, ary ny fihetseham-po ‘Oay, tena hafa tanteraka amin'ny fiainana niainanay tany Vietnam.”
Tsaroan'ny rahalahiny izy naterina tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra: “Nijery ireo ankizy hafa aho ary tena hafa izy ireo, na ny habeny na ny fitafiana sy ny zavatra rehetra. Ary nahatsiaro aho hoe ahoana no hahatonga ahy ho antonona ao? Saingy ny hitako dia nahita namana be dia be aho. Ary tena zavatra mahafinartira ny fahasamihafana “.
HEAR MORE FROM VIETNAMESE AMERICANS: StoryCorps collaborated with American Experience to collect stories from refugees and veterans about the end of the Vietnam War in 1975. Listen to the First Days Story Project.
RAHA TE HANDRE MOMBA IREO VIETNAMIANA AMERIKANA: niara-niasa tamin'ny Zava-nianana Amerikana ny StoryCorps mba hanangona ireo tantara avy amin'ireo mpitsoa-ponenana sy menavazana mikasika ny fiafaran'ny Ady Vietnam tamin'ny 1975. Henoy ny First Days Story Project (Tetikasa Andro Voalohan'ny Tantara).